စက်တင်ဘာထာဝရ: မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ဦး ဆောင် ကော် မတီ
မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ဦး ဆောင် ကော် မတီ
ကြေညာချက် အမှတ် ၁/၂၀၁၂
၁၀့ ၁၂့ ၂၀၁၂
၁။ အောက်မြန်မာ နိုင်ငံ သံဃာတော်များ နှင့် အထက် မြန်မာ နိုင်ငံ သံဃာ တော် များ ပူး ပေါင်း ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့ လှုပ်ရှား မှုဦး ဆောင် ကော်မတီ ကို ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၂ နေ့ တွင် ဖွဲ
့ စည်း လိုက် သည် ။
၂။ လက်ပန်းတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း တ
ွင် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နှင့် ပြည်သူ ပြည်သား တို့ ၏ အကျိုး ကို မျှော်ကိုး ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ဖော် ထုတ် နေ ကြ သော သံဃာတော်များ နှင့် ပြည်သူများ ကို လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ မှု တို့ ကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ များ ပြင်းထန် စွာ ရခဲ့ ကြပါသည် ။
သို့ ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့ လှုပ်ရှား မှု ဦး ဆောင် ကော် မတီ မှ အထက်ပါ လူ မဆန် သော လုပ်ရပ် များ ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့် ကွက် ရှုတ် ချ သည် ။
ထို့ အပြင် သံဃာ တော် အရှင်သူ မြတ် များ နှင့် ပြည်သူ လူ ထု အပေါင်း မှ မိမိ တို့ နိုင်ငံတွင် အထွဋ် အမြတ် ထား ကိုး ကွယ်လျှက် ရှိသော သံဃာ တော် များ ကို မီး လောင် ဗုံး များ ဖြင့် လူ မဆန်စွာ မီး လောင် တိုင်သွင်း ချေမှုန်း မှုကို ရှုတ်ချ သော အား ဖြင့် တစ် ညီ တစ်ညွှတ် တည်း ပူး ပေါင်း ပါဝင် ကြ ပါ ရန် အလေး အနက် တိုက် တွန်း လိုက် သည် ။
၃။ မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင် ရာ သံဃာ့ လှုပ်ရှား မှု ဦး ဆောင် ကော် မတီမှ အောက်ပါ အချက် များ ကို တောင်း ဆို လိုက် သည် ။
( က ) နိုင်ငံတော် သမ္မတ နှင့် အစိုး ရ အဖွဲ့ က ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ ကြသူ များ နှင့် သံဃာ ထု တစ်ရပ် လုံး ကို ဝန် ချ တောင်း ပန် ရန် ။
( ခ ) အကြမ်း ဖက် ဖြို ခွင်း မှုတွင် တာဝန်ရှိသော သူ များ ကို ဖော် ထုတ် အရေး ယူ ပေး ရန် ။
( ဂ ) ကြေး နီ စီမံ ကိန်း နှင့် ပါတ် သက် ပြီး ဖမ်းဆီး ထား သူ များ ကို ချွင်း ချက် မရှိ ပြန် လွှတ် ပေး ရန် ။
အထက်ပါ တောင်း ဆိုချက် (၃) ချက် ကို ၁၂့၁၂့၂၀၁၂ ရက်နေ့နေ့ လည် (၁၂ : 00) နာရီ တွင် နောက်ဆုံး ထား လိုက် လျောခြင်း မရှိပါ က မြန် မာ နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း လုံး ရှိ သံဃာ တော် များ နှင့် ပြည်သူ လူထု များ ပူး ပေါင်း ပြီး အထွေထွေ သပိတ်ကြီး ကို စတင် ဆင်နွှဲ သွား မည် ဖြစ် ပါသည် ။
အချိန်။ ။နေ့ လည် (၁ : ၀၀) နာရီ ။
နေရာ။ ။ ဦးပွား ဘုရား အတွင်း ( ဘုရား ကြီး တောင် ဘက်)မှတ်ချက်။ ။ မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်း နှင့် ဝိသုဒ္ဓါရုံ တိုက်သစ် ကြား သို့ကား ကြို များ လွှတ် ပေး မည် ။
မြန်မာ နိုင်ငံ လုံး ဆိုင် ရာ သံဃာ့လှုပ်ရှား မှု ဦး ဆောင် ကော် မတီ
(တစ် နိုင် ငံ လုံး အဆင် သင့် ပြင် ကြ ရန် လည်း တိုက် တွန်း ပါ သည်။ )
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 9:51 AM